Somali News 1.13.22
Cisbitaalka ugu weyn gobolka waxa uu waydiisanayaa Iowans inay is tallaalaan oo ay ka taxadaraan ka hortagga COVID-19. Taasi waa iyada oo infekshannada cusub ay weli sarreeyaan oo isbitaallada gobolka oo dhan ay kor u dhaafeen 900.
Maamulaha Jaamacadda Iowa Hospital iyo Clinics ayaa sheegay in kala duwanaanshaha omicron uu yahay khatar sababtoo ah si fudud ayaa la isugu gudbin karaa.
Gobolka Nebraska ayaa aaday maxkamad si uu u xannibo waajibaadka cusub ee waji-xidhka ee Omaha in kasta oo tirada kiisaska fayrasku ay aad kor ugu kacday bishan. Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Nebraska ayaa gudbiyay dacwadiisa goor dambe oo arbaca ah. Gobolku wuxuu ku doodayaa in Agaasimaha Caafimaadka Degmada Douglas Lindsay Huse aanu lahayn awood uu ku soo saaro amar waji-xidhka ilaa uu gobolku horay u ansixiyo.
Huse waxa ay sheegtay in ay aaminsantahay in ay ku sugan tahay sharci adag oo hoos imanaya awoodaha uu siiyay xeerka magaalada.
Gov. Nebraska Pete Ricketts oo ku sugan ciwaankiisa Gobolka ayaa maanta soo jeediyay canshuur dhimis loogu talagalay shirkadaha iyo dadka deggan ee dakhligoodu kor u kaco heerka ugu sarreeya ee gobolka. Guddoomiyaha Jamhuuriga ayaa sheegay inuu raadin doono inuu hoos u dhigo sicirrada ugu sarreeya ilaa 5.84%, oo ka hooseeya hadda 6.84% shakhsiyaadka iyo 7.25% ee shirkadaha
Saadaasha ayaa saadaaliyay in duufaanta jiilaalka ay ku soo daadin karto ku dhawaad cag baraf ah qaybo ka mid ah Iowa iyo meel kasta oo u jirta 3-10 inji gudaha Siouxland. Adeegga Cimilada Qaranka ayaa sheegaya in duufaantu u dhaqaaqi karto NW Iowa horaanta berrito iyada oo wadata dabaysha 20 ilaa 25 mph soo saarta jeebabka afuufida iyo baraf fidsan, gaar ahaan meelaha bannaan ee miyiga ah.
Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa maanta xannibtay amarka tallaalka COVID-19-ama-tijaabada ee shirkadaha waaweyn inay dhaqan galaan, laakiin waxay u oggolaanaysaa amarka tallaalka inta badan shaqaalaha daryeelka caafimaadka inay hore u socdaan.
Guddoomiyaha Iowa Kim Reynolds ayaa ku biiray dacwadaha ka dhanka ah labadaas waajibaad, iyo mid ka dhan ah qandaraaslayaasha federaalka. Waajibka shaqaalaha daryeelka caafimaadku waa kan kaliya ee hadda dhaqan galay.